अन्तरवार्ताः विप्लवले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपले हल गर्नुपर्छः भण्डारी- केन्द्रीय सदस्य (नेकपा) — OnlineDabali
‘कम्युनिष्टको नेतृत्वमा पाँच मात्र होइन कम्तिमा दश वर्ष सरकार चल्छ’
Posted on September 16, 2018 by अनलाइन डबली
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य मध्ये सबैभन्दा कान्छो केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी (प्रतिरोध) जो १४ वर्षको कलिलो उमेरदेखि नेपालको इतिसमा एक उथलपुथलकारी दशवर्षे जनयुद्धमा सामेल भएका थिए ।
हुम्लाको ठेहेमा जन्मिएका भण्डारीसँग अनलाइन डबलीको लागि धनन्जय बुढाले लिएको अन्तरवार्ता ।
पहिलो र तेस्रो ठूलो पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको केन्द्रिय सदस्य बन्नु भयो कस्तो अनुभुति भइरहेको छ ?
निकैनै खुसी लागेको छ । १४ वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा पार्टी आन्दोलन् र क्रान्तिप्रति बफादार भएर लागिरहेको छु । पार्टीले दिएका हरेक जिम्मेवारीहरुलाई इमान्दारितापूर्वक बहन गर्दै आएको छु । अहिले एकीकृत पार्टीले विश्वास गरेर केन्द्रिय सदस्य चुनेकोले अझै बढी जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ । तर, यो मेरो अन्तिम गन्तव्य भने पक्कै पनि होइन । बरु यो एउटा बाटो हो, जहाँबाट हामीले हिजो जनयुद्धमा जनताका सामु खाएका कसमहरु र क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुछ । हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले देशमा ‘राजनीतिक स्थायित्व सहितको समृद्ध र स्वाधीन राष्ट्र निर्माण’को लागि महाअभियानको उद्घोष गरेको छ र त्यस कार्यको सफलता र जनताको थप सेवा गर्ने अवसरका रुपमा बुझेको छु ।
जन्मथलो हुम्लाबाटै जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो, आज यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ, पछाडी फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्ने गर्छ ?
जनयुद्धकालीन राजनीतिक पृष्टभूमीतिर फर्केर हेर्ने हो भने हामीले विगतमा जीवन–मरणको लडाइँ लड्यौं खुकुरीको धारमाथि टेकेर यहाँसम्म पुग्यौं, हिजोलाई नियालेर हेर्दा हामी आज ‘नाफाको जिन्दगी’मा राजनीति गरिहेका छौं । शान्तिप्रक्रियापछि पनि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, तर विगतका केही दशकदेखि जिल्लामा अन्य पार्टी विशेष गरेर नेपाली काँग्रेसले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र कब्जा गरी बसेकोले केही वर्ष हाम्रा लागि क्रान्तिको समयभन्दा फरक रहेन । हामीले हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व स्थापित गर्न निकै कठिन भएको थियो ।
जिल्लामा तपाईँको नेतृत्वलाई चुनौती कुन पार्टीले दिएको हो ?
विशेषत हुम्लाको परिवेशमा नेपाली काँगे्रसले नै विगत करिब २ दशकदेखि राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको अवस्था थियो । हामी खुल्ला राजनीतिमा आएपछि उनिहरुले हर तरिकाले माओवादीको अस्तित्वलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेको इतिहास छ । मुलतः उनिहरुको बुझाई भनेको ‘माओवादीहरु जंगलबाट आएका हुन् र नेपाली कांग्रेसको एकल राजमाथि धावा बोल्न आएका हुन्’ भन्ने संकिर्णताको परिणाम हामीले बारम्बार भिडन्त र द्वन्द्व खेप्नु परेको थियो । तर, जब हामीले जनतामार्फत आफ्नो जनमत स्थापित ग¥यौं तब उनिहरुले आफूलाई बदल्दै गए र अहिले सहज र राजनीतिक सह–अस्तित्वको वातावरण कायम छ ।
हिजो नेपाली काँग्रेस जहाँ थियो आज त्यो ठाउँमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तपाईँहरु हुनुहुन्छ, तरपनि जनताले तात्विक भिन्नता महसुस गर्न सकेका छैनन् नि ?
परिवर्तन र विकास आजको भोलि नै वा क्षणभरमै हुनेभन्दा विस्तारै हुने हो । मेरो बुझाईमा मुलत दुई किसिमले यो प्रक्रिया हुने गर्छ । पहिलो मान्य समाज विकास र रुपान्तरण प्रक्रिया अनुसार हुने गर्छ । दोस्रो हामी मानिसको सचेत पहलकदमीद्वारा, हामीले दशवर्षे जनयुद्धमार्फत राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका निम्ति ग¥यौं । भलै हामीले जनअपेक्षा र बलिदान गरे अनुसारको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सकेनौं, हामीले त्यसलाई स्विकार गरेका छौं । तर, हाम्रा विरोधीहरुले भनेजस्तै, हामीले केही नगरेको भन्ने गलत आरोपको खण्डन गर्न चाहन्छु । किनभने राष्ट्रिय राजनीतिको कोणबाट हेर्ने हो भने अभूतपूर्व काम गरेका छौं । देशमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघियतामार्फत केन्द्रको शक्तिलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रिकृत गरेका छौं । अनि हाम्रो हुम्लालाई उदाहरणको रुपमा लिँदा पनि हिजो सामन्तहरु, जिम्मुवाल, मुखियाको अधिनमा समाज हुने गर्दथ्यो र उनिहरुको स्वएच्छाचारिताको अगाडि जनता ‘चू’ पनि गर्न सक्दैन थिए । तर हेर्नुस् त अहिले दलित, महिला, होचा–निमुखा जनता कति निडर र स्वतन्त्र भएर अन्यायविरुद्ध आवाजहरु मुखरित गर्छन् र आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्ने आट गर्दछन् । यसरी हिजोको र आजको समाजमा आकाश पातल फरक छ । त्यो सबै हाम्रो सचेत पहल अथवा जनयुद्धले दिएको उपलब्धि हो । रह्यो कुरा भौतिक विकासको, त्यो पनि हिजोको भन्दा रफ्तारमा गइरहेको छ । फेरि सरकार अहिले संघीयतालाई संस्थागत गर्न बढी ध्यानमा छ ।
उत्साह र जोशका साथ २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा कर्णजित बुढाथोकीले जितेको ७० सालमा क्रमभंगता किन भयो त ?
हो २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा जनयुद्धको रापताप र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा देश भरिको सिंगो पार्टी–पङ्ती एकजुट भएर जनतासँगै जुरुक्क उठ्यो र हाम्रो जिल्लामा पनि शुशिलजी विशाल मत अन्तरले विजयी भएजस्तै पार्टीले झण्डै बहुमत नै ल्याएर देशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा अगाडि आएको थियो । तर, २०७०को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने हाम्रो जिल्लामा मात्रै नभएर तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले देशैभरबाट लज्जास्पद हार बेहोर्दै पहिलोबाट तेस्रो दल हुनपुग्यो ।
यस्तो हुनुको मुल कारण ?
पहिलो संविधानसभाको चुनाब अनि सरकार निमार्णको समयदेखि नै पार्टीमा दुईलाइन संघर्ष मौलाउँदै गएको थियो । पछिल्ला समयमा जनमुक्ति सेनालगायतका विषय तथा विभिन्न विषयमा कडा वैचारिक संघर्ष चर्किएसँगै विभाजन भएर क्रमभंगता आयो । एउटा यथास्थितिमा (प्रचण्ड कमरेड नेतृत्व (माओवादी) चुनावमा र वैद्य कमरेड नेतृत्वको (माओवादी)मा देशभर क्रान्तिकारी स्प्रिटकासाथ बहिष्कारमा उत्रियौं । जसको परिणाम ७० को चुनावमा हामी हाम्रो जिल्लामा वहिष्कार सफल पार्नतिर लाग्यौं । त्यसकारण त्यो जितहारसँग हामीलाई कुनै मतलवभन्दा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनको कुरा प्रधान भयो, अरु कुरा गौंण ।
अहिले तपाईँलगायतका साथिहरु यथास्थितिमा नै फर्कनु भए छ नि ?
पृथ्वी गोलो छ, समय परिवर्तनशील छ, डाइनोसरहरुलगायतका ठूला जनावरहरु समय अनुकुल आफूलाई बदल्न नसक्दा लोप हुँदै गएको प्राकृतिक इतिहास छ । ठिक त्यसरी नै तत्कालिन वैद्य कमरेड नेतृत्वले जनयुद्धका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई बचाउने रटान मात्रै लगाउनु भयो तर उहाँहरु समयअनुसार आफूलाई ब्यवहारिक रुपान्तरण र विकास गर्न सक्नु भएन जसको परिणाम तपाईँले अहिले उहाँहरुको अवस्था देखिरहनु भएको छ । तर, हामीले मुलधारमा फर्किए लगत्तै स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र चुनावमा माओवादीको स्थितिलाई व्यापक रुपले सुधार भएसँगै एमालेसँग एकता गरेर राजनीतिक स्थायीत्व र जनताका निम्ति अभुतपूर्व कदम चाल्न सफल भएका छौं । मेरो जिल्लाको हकमा ४ ठाउँमा माओवादी एक ठाउँ तत्कालिन एमाले २ ठाउँमा काँग्रेसले नेतृत्व गरेको छ ।
तपाईँ क्रान्तिकारी स्प्रिड पकडेर बसेको मान्छे, गलत भनेको पूरानो बाटोको के कुरामा सहमत भएर फर्किनु भयो ?
यसमा अघि पनि भने । मैले यताभन्दा वैद्य कमरेडहरुले समय अनुकुल नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन र संगठनलाई प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न नसक्दा उँदोगतीतिर पार्टी संगठन भएपछि बरु पूरानै घरतिर फर्किदा क्रान्तिको बाँकी कार्यभार नयाँ तरिकाले यतैबाट सम्पन्न हुने कुरामा म विश्वस्त भएँ । अर्काे खास कुरा भनेको विश्व राजनीतिक परिवेश भनेको सानासाना खुद्रा पसल र नाङ्ला थापेर मालिक हुने प्रचलनभन्दा सुपर मार्केटको जमाना हो, जहाँ धुर्विकरण–एकता–संघर्ष र रुपान्तरण हो । किनभने नेपाली भूमिमा भएको जनयुद्ध रामायण र महाभारतको कथा जस्तो होइन हामी आफै सामेल भएको प्रत्यक्ष लडाइँ हो, त्यसको सफलता, क्षति या के फाइदा के बेफाइदा भयो सबै कुराको भुक्तभोगी हामी आफै भएकोले कसैका मिठा कुराले पछी दौडनेभन्दा समयको मागअनुसार हिडेको । अहिले एमाले र माओवादी ठूलो पार्टी हुन एकता भएका होइनन् यदि त्यसो हो भने सबैभन्दा ठूलो त एमाले छँदै थियो नि, त्यसकारण यो एकता देशलाई राजनीतिक स्थायीत्व र समृद्धिको निम्ति भएको हो । यहि कुरामा हामी सहमत भएर आज यो पोजिसनमा छौं ।
तपार्इँले एकताको जोडदार आधारको कुरा गर्दैगर्दा तपार्इँको जिल्लामा पनि यस विषयमा विवाद देखिएको छ भन्छन् नि ?
हाम्रो एउटा स्थानीय उखान छ, ‘जति भाँडा उत्ति चुर्का, नाई भाँडा नाइँ चुर्का’ भनेजस्तै, अहिले खासमा नेकपा हुम्ला जिल्ला नेतृत्व सम्बन्धि जुन विवाद छ भन्ने छ त्यो गलत छ, किनभने अहिलेको नेतृत्व चयनको कुरा जुन छ । पहिलो कुरा त अहिले कुनै सम्मेलन अधिवेशनले चयन गर्ने भन्दा पार्टी एकताको भावमार्फत नै हुने हो, र अहिले जिल्लामा डा.दीपेन्द्र रोकाया र लालकेश जैशी दुईजना मात्रै होइनन्, अरु पनि सम्भावित नेतृत्वका उम्मेदवार धेरै छन् । कुरा के मात्रै हो भने अहिले उहाँहरु दुईजनाको आकाङ्क्षा बाहिर सार्वजनिक भएको हो । साथीहरुको हिजोदेखि त्याग–तपस्या र लगानी छ । नेतृत्व हुनसक्ने योग्यता पनि छ यसरी आकाङ्क्षा राख्नुलाई विवाद भन्दा म स्वभाविक ठान्छु ।
उसो भए के दुईजना भन्दा बाहिरबाट पनि अध्यक्ष हुने सम्भावना छ र ?
अहिले दुईजनाको आकाङ्क्षा बाहिर आएको हो, उहाँहरुको बराबर पार्टीमा लगानी र योगदान गरेका साथीहरु अरु धेरै छन्, जसले आन्तरिक रुपमा नेतृत्वको दाबी गरिरहनु भएको छ । त्यसलाई पनि हामीले अस्वभाविक मानेका छैनौं, त्यसैले म पूर्ण विश्वस्त छु कि अब छिट्टै केहि दिनभित्र स्वभाविक रुपमा नै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया टुङ्गिने छ ।
आकाङ्क्षी मुख्य दुई जना छन् तपार्इँहरु पनि पक्ष–विपक्षमा रहनु भएको छ । केन्द्रमा पनि नेताहरुका घर दैलोमा दौडधुप पनि चलेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
कसले कहाँ के गरिरहेको छ, त्यो गौण कुरा हो । मेरो विचारमा त्यस्तो कुराले खासै अर्थ राख्दैन । अधिवेसन नहुन्जेलसम्मको लागि एकता भाव दिन पार्टीलाई बढी प्रभावकारी र उपयुक्त पात्रलाई पार्टीले नेतृत्व चयन गर्ने हो । फेरि नेतृत्व भनेको अध्यक्ष पद मात्रै होइन आकाङ्क्षी साथहरुले विभिन्न कार्य विभाजनअनुसार विभिन्न जिम्मेवारी जानुहुन्छ ।
तपार्इँको समर्थन कतातिर वा तटस्थ बस्नु हुन्छ ?
मैले कता समर्थन गर्नेभन्दा पनि मुल कुरा पार्टीको हो । हामी एकता प्रक्रियामा छौं । यस प्रक्रियालाई जिल्ला हुँदै इकाई सेलसम्म लग्नु पर्नेछ । त्यसैले म एकजनाले के गर्नेभन्दा पनि समग्र पार्टी योजना कार्यक्रम अनुसार कसलाई अगाडि बढाउँदा सहि हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो । यसो भन्नुको मतलब मेरो कुनै मत छैन भन्ने पनि होइन तर त्यो भन्दा पार्टीको निर्देशन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सुनिँंदैछ कि तपाईँहरुले समेट्न नसकेका सहकर्मीहरु अन्य पार्टीमा जाने तयारीमा छन् भन्ने आएको छ नि ?
‘पानीलाई धमिलो बनाएर ढडिया थापेर माछा मार्न’ कोही पक्कै बसेका पनि होलान्, हाम्रोमा केही असन्तुष्ट भएर विभाजन भएर आफ्नोतिर आउनेछन् भन्ने कसैको मन्सुवा होलान् जुन ‘मनको लड्डु घ्यूसँग खानु’ जस्तै बाहेक अन्तत केहि पनि हुनेवाला छैन ।
हुम्ला जिल्लाको माओवादी राजनीतिक इतिहासमा तपाईँहरु विगतदेखि अहिलेसम्म जति विभाजन भए पनि एक अर्कामा सौहार्दता र हार्दिकता नै रहेको विगत छ, तर अब के हुन्छ ?
अब पनि एकदम हार्दिकताले निरन्तरता पाउने देख्छु । हिजो माओवादी मात्र एकजुट भएका थिएनांै तत्कालिन् एमाले लगायतका बामपन्थि शक्तिहरु एकजुट भएका थियौं । हाम्रो जिल्लाको हकमा हिजोदेखि नेपाली कांग्रेससंग हाम्रो संघर्ष हो । अब पनि फेरि लडाई त्यतै तेर्सिनेवाला छ, सुशिल कम्रेड हामी भन्दा टाढीनु भएको छ जहाँसम्म उहाँले आगामी राजनीतिक लगायतका अन्य कठिन परिस्थितीहरुमा आफ्नो पोजिसन प्रगतिशील, बामपन्थि शक्तितिरै क्लियर गर्नु हुने छ, किनभने उहाँलाई हामीले हिजो नेता मानेको हो भोलि पनि मान्न तयार भएकै हो ।
नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र चीन सरकारसंग पारवान सम्झौता गरेको छ, त्यसमध्ये तपाइको जिल्लाको यारी नाकामा पनि सुक्खा बन्दरगाहा बन्ने भएको छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो सम्झौता नेपालको निम्ति निकै नै महत्वपूर्ण छ, किनभन्नले यसले सदियौं देखि भारतसंगको एकल निर्भरतालाई विकल्प दिएको छ । अर्को हिसाबले भन्ने हो भने भारतसंगको एकाधिकारलाई तोड्न सफल भएको छ । त्यस्तै हाम्रो जिल्लाको यारीमा बन्ने भनेको सुक्खा बन्दर्गाहाले पूर्वाधारको विकासको अभावको कारण तत्काल देश र जिल्लावासीले लाभ लिन नसके पनि यो दिर्घकालिन हिसाबले निकै महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । संगै हुम्ला सामरिक हिसाबले अलिक संवेदनशील छ त्यता पनि सर्तक हुँदै काम कारबाही अगाडी बढाउनु पर्छ ।
अझै पनि हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन, के छ तपाईँको सरकारको योजना ?
हो, हामी यस कुराप्रति निकै चनाखो भएर लागिरहेका छौं, सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माणका लागि दवाब दिइरहेका छौंं । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले सरकारले नेपाली सेनाको विकास कार्यादललाई खटाएको छ । जसले निकै दु्रत गतिमा बाटो खन्ने, चट्टान फुटाउने कार्य गरिरहेको छ । सायद अबको २ वर्षमा त्यो कार्य सम्पन्न हुन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौं, तपाईँको पार्टी नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ नि ।
पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायीत्व र समृद्धिका निम्ति नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसबाट प्रतिपक्ष दलहरु अत्तालिएर त्यसलाई भोलिको आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व संकटको रुपमा लिएको कारण सानातिना कुरामा पनि आलोचना गर्न थालेका छन् । दोस्रो कुरा भनेको सत्ता बाहिर रहेका दलहरुसँग न कुनै विशेष एजेण्डा छन् न त सरकारविरुद्ध खनिने कुनै बलियो आधार नै । त्यसैले उनिहरु ‘तिललाई पहाड’ बनाएर कहिलै गोविन्द केसीजस्ता सामाजिक अभियानताको एजेण्डामा सिंगो पार्टी आन्दोलित हुन्छ ।
तेस्रो कुरा भनेको पहिलाका सरकारहरुको तुलनामा जनताले बढी आशा र अपेक्षा राखेको र त्यो सरकारले पूरा गर्न नसकिरहेको हुँदा पनि सरकारमाथि प्रहार भइरहेको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान हुँदै पार्टी एकता र अहिलेको बहुमतिय सरकार बन्दासम्मको यो आफ्नै मौलिकतामा आधारीत यो समिकरणप्रति देशि–विदेशी शक्ति चिन्तित छन् । त्यसकारण पनि सरकारका सामान्य कमिकमजोरी र अनावश्यक कुरामा बखेडा झिकेका हुन् । यस्ता विषयले खासै असर भने गर्दैन, ति सबै असफल प्रयासमा सिमित हुने छन् ।
कतिपय मानिसहरु एकता धेरै टिक्दैन भन्छन् नि ?
यो एकता दिर्घकालिन् रुपमा नै अघि बढ्छ र एकतामा विचार सिद्धान्त मिल्ने शक्तिहरु आउँछन् र विचार सिद्धान्त नमिले पनि राष्ट्रिय एजेण्डा कार्यक्रम मिल्ने शक्तिहरु धुर्विकरणमा आउँछन् । त्यसकारण यो एकता टुट्नेभन्दा झन् बलियो हुँदै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार ५ वर्षमात्रै नभएर कम्तिमा पनि १० वर्षसम्म जमेर जान्छ ।
हिजोका तपाईँहरुकै सहकर्मी विप्लव नेतृत्व नेकपाप्रति कम्युनिष्ट सरकार आक्रामक भएको छ भनिन्छ, के हो सत्य ?
तपाईँ हामीले राज्यसत्ता बुझेका छौं कि सत्ताले शान्ति सुरक्षामार्फत देशको सम्पूर्ण अवयव आफ्नो काबुमा राख्ने कोशीस गर्छ । त्यसै अन्तरगत अहिले सरकारले आफ्नो कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ । योसँगै वार्ताको लागि आह्वान पनि गरेको छ ।
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका देशमा भएका विभिन्न शक्तिहरुलाई दुई भागमा विभाजन गरिनुपर्छ । वाह्य शक्ति वा कुनै संगठनकोे आडमा देशमा अपराधिक गतिविधि गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही अगाडी बढाउनु पर्छ । कतिपयले देश टुक्राउनु पर्छ भनिरहेका छन् त्यस्तालाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न । तर, राजनीतिक रुपबाट आएका कुरालाई राजनीतिक रुपमा नै ब्यवहार गरिनु पर्छ । नत्र भोलि देश नै अप्ठ्यारोमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । किनभने हामीले वास्तविक क्रान्तिकारी–कम्युनिष्ट शक्तिलाई पनि राम्रोसँग बुझेका छौं । त्यसैले सरकारले विप्लवले उठाएका कतिपय राजनीतिक एजेण्डालाई राजनीतिक तबरबाटै समस्याको हल गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
अन्त्यमा अरु केही भन्नु छ कि ?
अन्त्यमा मेरा विचारहरुलाई बाहिर ल्याउन मद्दत गर्ने अनलाइन डबलीलाई धेरै–धेरै धन्यवाद र मलाई साथ सहयोग र शुभेक्षा राख्ने नेता गण तथा आम हुम्लिवासी आमाबुवा दाजुभाई दिदि बहिनीहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।